Hanashooyinkiisa Serie A, Rikoorrada Safashadiisa & Shabaq Ilaalinta, Diwaankiisa Qaranka & Xaqiiqooyin Laga Diyaariyay Goolhaye Gianluigi Buffon - Laacib.net
Hanashooyinkiisa Serie A, Rikoorrada Safashadiisa & Shabaq Ilaalinta, Diwaankiisa Qaranka & Xaqiiqooyin Laga Diyaariyay Goolhaye Gianluigi Buffon
Goolhaye Gianluigi Buffon ayaa ku dhawaaqay inuu isaga tagayo kooxda Juventus xilli uu 17-sano ku qaatay magaalada Turin, balse taasi kama reebin saxaafadda Italy iney durba xaqiiqooyinka la xiriira waayahiisa ka diyaariyaan waayahiisa.
Buffon oo ah halyeeyga qaranka Italy iyo Juventus ayaa ka mid ah haatan shaqsiyaadka lagu tixgeliyo goolhayenimada, waxeyna dadka qaar u tusmeeyaan inuu yahay kii ugu wanaagsanaa qarnigaan 21-aad.
Iyadoo ay taasi jirto, ayey warbaahinta talyaaniga qaarkood dhawr xaqiiqo kasoo qoreen waayahiisa kubadda cagta.
Gigi Buffon wuxuu noqday goolhayaha ugu safashada badan horyaalka talyaaniga isagoo saftay 639 kulan, sidoo kalana waa ciyaariyahanka labaad ee ugu safashada badan horyaalka oo dhan isagoo ka dambeeya Paolo Maldini oo 647-kulan ciyaaray.
Buffon wuxuu u ciyaaray Juventus 655 ciyaarood tan iyo markii uu kusoo biiray 2001, isagoo shabaqiisa ilaashaday 300 kulan.
Guud ahaan Gigi Buffon wuxuu ciyaaray heerkiisa kooxaha 875 kulan, waxaa laga dhaliyay 729-gool halka uu shabaqiisa ilaashaday 383 kulan.
Gigi wuxuu heystaa rikoorka aqiiqadaha ugu badan ee aan shaqiisa gool la taabsiin, 974 daqiiqo xiriir ah ayaan shabaqiisa la taaban fasal ciyaareedkii 2015-2016.
Gianluigi Buffon waa ciyaariyahanka ugu safashada badan qaranka Italy isagoo kasoo muuqday 176-kulan.
Kaliya Alessandro Del Piero ayaa ciyaaray in ka badan kulamada kooxda Juventus ee tartamada oo dhan (705) balse ma jiro mid ciyaaray daqiiqado ka badan.
Buffon wuxuu heystaa rikoorka ciyaariyahanka ugu safashada badan kooxda ee dhanka Champions League. 115-ciyaarood ayuu ciyaaray, sidoo kalana tartamada yurub si guud wuxuu 124 kala siman yahay Del Piero.
Gigi wuxuu ciyaaray in ka badan 1,000 (kun kulan) xirfadiisa kubadda cagta dhan walba – koox iyo qaranba.
Ma jiro goolhaye kasoo xamaashay Serie A-da oo kala siman ku guuleysiga abaalmarinta goolhayaha sanadka maadaama uu 12-jeer heysto.
Buffon wuxuu laba jeer helay rikoorka goolhayaha ilaashaday shabaqiisa kan ugu badan hal fasal ciyaareed min 21 kulan ayaan gool laga dhalin 2011-12 iyo 2015-16.
Buffon wuxuu heystaa rikoorka goolhayaha ugu shabaq ilaaliska fiican Italy, 77-kulan ayaan gool laga dhalin, sidoo kalana wuxuu heystaab kan ugu rigoore badbaadinta badan qaranka (5-jeer) ayuu badbaadiyay halka uu yahay kan ugu badan ee koob aduun shabaqiisa ilaashaday (6-jeer).
Hadii lacagta loo xisaabiyo Euro ahaan, Buffon wuxuu baaqi kusii ahaanayaa goolhayaha ugu qaalisan waqtiga oo dhan, Juvntus ayaana sanadkii 2001 ka bixisay aduun dhan 52 Malyan oo Euro.
Gianluigi Buffon wuxuu rikoorka ku guuleysiga horyaalada xiriirka ah la wadaagaa xidigaha kala ah: Andrea Barzagli, Giorgio Chiellini, Stephan Lichtsteiner, and Claudio Marchisio kadib markii ay xaqiijiyeen sanadkaan midkooii 7-aad.
Buffon wuxuu kali ku yahay inuu ku guuleystay 9-jeer horyaalka talyaaniga, sidoo kalana wuxuu xisaabsadaa 11 maadaama labadii horyaal ee 2004/2005 iyo 2005/2006 looga celiyay fadeexadii Calciopoli.